warshadaha Shiinaha ee sports dhacyaan sida maal raadiyaan ilaha cusub ee koritaanka - Shiinaha Tianjin Shengxin Sports Badeecadaha
FUZHOU - ILAALI kor dhawaaq iyo xawaaraha joogta ah horumarka, warshadaha ciyaaraha Chinese ayaa la dhacyaan 2016 sida maal isku dayeen in ay dabooli kala duwan ee ganacsiga, halka helo matoorada cusub in la wado koritaanka.
Golaha State Shiinaha ayaa soo saartay dokumenti ee 2014 si toos ah horumarinta warshadaha ee ciyaaraha iyo si kor loogu qaado isticmaalka isboortiga. No 46 file ayaa loo arkaa guul taariikhda bararka industry ee.
siyaasadda gobolka, ku salaysan dokumenti qaranka, ayaa la sii daayay inta lagu guda jiro 2015 ee gobollada kala duwan, iyo tallaabooyin gaar ah laga soo qaatay iyo heerka magaalada iyo gobolka.
Maamulka Guud ee Sport daabacay Plan 13aad Shan sano on warshadaha ciyaaraha ka this July, iyo qaar ka mid ah 22 dukumentiyada kale ee satellite si ay u taageeraan qorshaha. Warqadahaasi waxay sharax in industry ee ciyaaraha ka badnaan doonaa 3 trillion yuan ($ 432 bilyan) by sanadka 2020. qiimaha warshadaha ayaa ku daray ayaa la filayaa inuu ku dhacay boqolkiiba hal GDP, iyo isticmaalka isboortiga ayaa la filayaa inuu ku dhacay 2.5 boqolkiiba dakhliga la tuuri karo per capita by markaas .
Barnaamijka Qaranka ee Fitness (2016-2020) iyo Outline Healthy Shiinaha (2030) ayaa sidoo kale soo saaray sanadkan si ay u bixiyaan tilmaamaha cad istaraatijiyad qaran taam iyo caafimaadka muwaadiniinta 'iyo warshadaha ciyaaraha ballaaran iyo sidoo.
Golaha State ayaa sidoo kale tilmaamay dhibaatada ka jirta status quo oo ka mid ah warshadaha taam iyo wakhtiyada firaaqada ah isboortiga, bixiya tilmaamaha sida in hawlaha ugu waaweyn ee ka hor in tilmaamaha ay qaranka soo saaray October this.
Waxaa intaas dheer, Maamulka Guud ee Sport, si wadajir ah ula waaxaha badan oo kale qaranka dawladeed, siyaasadaha la daabacay iyo qorshayaasha sanadkan on isboortiga qaboobaha, isboortiga biyaha, sports Aero, isboortiga dibada buuraleyda iyo hawlaha kale.
Siyaasadahan la xiriira warshadaha ee sports ma aha darbo Diintooda mugdi ah, iyagu waa waqti isku mid macquul ah, wax ku ool ah oo ku xeeldheer. Waxay ku bixiyey map wadada u ah horumarinta warshadaha ciyaaraha Shiinaha ee sannadaha soo socda.
Qodaya IP top, lacag tegey ballaaran
In hab si weyn uga duwan hir iibsiga caalamka oo arkay sanadkii la soo dhaafay, maal-sports Chinese darradaas waxay bilaabeen inay u dhaqmaan si taxadir in 2016 iyo in ay raadiyaan Dariiqa wanaagsan oo ganacsi.
Rafaa tafaariiqda Shiinaha ee Suning Group ayaa helay saamiga boqolkiiba 70 ee kooxda kubada cagta Talyaaniga Inter Milan, heshiis ku kacaya 270 milyan oo euros ($ 282 million), laga yaabee gabal ugu weyn ee wararka inay ka soo baxaan warshadaha ee ciyaaraha sannadkan.
Dhanka kale, doodiisa sii kordheysa badan oo magaalada waa la wareegaayo industry ee focus in ay kor u wadista qiimaha suuqa ee isku biimeynta ah isboortiga.
Shirkadda xirka Shiinaha ayaa Ciyaar bulshada Tencent heshiis kula saxiixatay FIBA, noqoshada ay iskaashadaan top sagaal sano ee soo socota. iskaashiga ka dhexeeya FIBA ​​iyo Tencent ka dhici doona ee beeraha ee xiriirka bulshada, lacagta online, Streaming online iyo e-commerce.
Wajahadda iskaashiga waa-ballaarinta. Rafaa hantida maguurtada Chinese Wanda Group ayaa aasaasay iskaashi gaar ah FIBA ​​for xayaysiin ah dunida oo dhan, oo ay ku jiraan iibinta xuquuqda liisan iyo xuquuqda suuq caalami ah muddo afar basketball koobka adduunka, si loo 2033.
Iskaashiga waxaa ubaxu on hore gudaha iyo sidoo. Chinese adag e-commerce Ali Sports wareegay xuquuqda gaar TV waayo, Kuuba (Chinese University Basketball Association). Shirkadda video Online Storm Sports balaarisay ganacsi oo ay ku jiraan CBA ah (Chinese Basketball Association) baahinta live. Waxaa la filayaa in tartanka loogu jiro xuquuqda CBA ee TV noqon mid aad u adag oo kululayd ee 2017 doonaa, ka dib markii CBA ku daray in ay shirkad gaar ah sanadkan.
Wanda Group kor u shaqeyn doona xiriirka kubadda cagta ee Shiinaha in uu abaabulo tartanka kubadda cagta China Cup 2017, isagoo balanqaaday inuu ku dhaggan si fiican u yaqaan in mustaqbalka ka dhigi. Dhanka kale kooxda Suning dhigay maal-wayn in iibsiga xuquuqda TV waayo Ciyaar English Premier League, oo Ti'ao Dongli, haystaha xuquuqda for Chinese Super League (isugu gayso) ayaa aasaasay ay xarun baahinta TV u gaar ah.
Waxa intaa dheer in ganacsi IP ah, maal-sports u tageen inay kala duwan goobaha guud ahaan warshadaha. Sida laga soo xigtay dukuminti cilmi on maalgashiga ciyaaraha iyo maalgelinta by wakiilka madax banaan Sports Bank ah, lacag ayaa sidoo kale u tageen inay barnaamijyo garoomada qalliin, dhacdooyinka isboorti marketing, warbaahinta isboortiga, bodybuilding, tababar jireed iyo dalxiiska ciyaaraha. Ka dib markii ku guuleystay maalgelinta, GOORMUU badan oo ganacsi ayaa la dadaalaya horumarinta dheeraad ah by wajahayo caqabadaha aasaasiga ah ee ku guuleystay macaamiisha ka badan.
Zhong Bingshu, madaxa at University Capital Waxbarashada Jirka iyo Sports, u sheegay Xinhua in ilo weyn ee magaalada waa gaajaysan ee magacyada comparably weyn iyo kooxaha si ay u sameeyaan iskaashi la, laakiin arkaa wareeg ah in dhaqanka suuqa sanad-on-sano.
"Xaddi badan oo caasimadda ku orday galay warshadaha ee ciyaaraha, gaar ahaan meelaha isboortiga dhacdooyinka iyo iskaashiga kooxo caanka ah ee 2015. Arrintan ayaa hoos u dhac ayaa ku 2016. maal The helayso wax maangal ah oo ay ku fikirayaan gasho lacag. Waxa intaa dheer in dhacdooyinka isboorti, waxaa jira heshiis weyn oo suuq ka iman karta taam iyo wakhtiyada firaaqada ah isboortiga, "Zhong arkay.
dhaqaalaha 'Sports +'
isdhexgalka Cross-warshadaha waa mid ka mid ah qaababka ugu cad ka mid ah warshadaha ciyaaraha Chinese ayaa la ballaariyey suuqa soo galay beerihii dalxiiska, dhaqanka, waxbarashada, daryeelka caafimaadka, iyo shabakadaha bulshada. horumarinta warshadaha ee guud mar dambe xarumaha agagaarka kaliya naftooda dhacdooyinka; meelaha cusub ee koritaanka iman kara ayaa kor u furan fursado cusub. Xaqiidii Kuwani iskaashi cross-warshadaha waxaa loo yaqaan 'ciyaaraha +' fursadaha.
Qaado ciyaaraha + dalxiiska sida mid ka mid ah tusaale ahaan. 3.38 milyan oo qof ay ku lug lahaayeen qaar ka mid ah 311 dhacdooyinka ciyaaraha ka Jan inay April ee sanadkan, wax baabbi'iya guud ahaan 11.9 bilyan oo yuan ($ 1.7 billion) ee gaadiidka, isgaarsiinta, hotels, cuntada, iyo adeegyada kale.
xogta isugu gayso rasmiga ah waxay muujinaysaa in size daawadayaasha celcelis ahaan kulan kasta xilli ciyaareedkan ahaa 2,000 badan ee 2015. Waxaa intaas dheer in arkaysid kulan ku nool yihiin, taageerayaasha iyo aad u badan yihiin kulamada ka daawado internetka. Isbeddelo la mid ah ayaa ka soo muuqanaya basketball, volleyball iyo kubbadda miiska.
The ganacsiga 'ciyaaraha +' ayaa sidoo kale u baahan in ay ka gudbaan filnaan la'aanta ay lagu jiro marxaladan hore ee dhinaca horumarinta. Shirkadaha isboortiga Dad badan oo aan awoodin in ay ku raaxaystaan ​​siyaasadaha canshuurta ahaaneed iyo qaar ka mid ah xeerarka iyo qawaaniinta deegaanka waa ku Hadhi fog ka danbeeya horumarinta warshadaha.
ururada Sports, kuwaas oo qaar badan aan la edeb iyo dhigay xubnaha aan dawliga ahayn, ayaa gacanta daciif ah inuu ka ciyaaro horumarinta warshadaha. Dhanka kale, la'aanta ah ee kaabayaasha ciyaaraha wali waa dhibaato weyn magaalooyin badan.
Going weeraryahanka, khubaro warshadaha ayaa sheegaya in ganacsiga isboortiga, sida xiddig cusub barar cadu ku yaal dhaqaalaha Shiinaha ee, waxay u baahan tahay samir iyo dhaqanka ku wargeliyay by cilmi suuqa aasaasiga ah halkii khamaarka la xaddi badan oo magaalada iyaga oo raadinaya guul degdeg ah iyo faa'iidooyinka deg dega ah.
waqti Post: Jul-26-2018